बजार रिपोर्ट - नारी
स्वास्थ्य परीक्षणमा डिजिटल उपकरण
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर उत्कर्षमा थियो । दैनिक संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्दै थियो । चिकित्सकहरूले बिरामीलाई ज्वरो र अक्सिजनको मात्रा नाप्न सुझाव दिइरहेका थिए । काठमाडौं कोटेश्वरका प्रमोद खड्का पल्स अक्सिमिटर खोज्दै त्रिपुरेश्वरस्थित एक मेडिकल पसल पुगे । त्यहाँ उनले भने, ‘संक्रमित हुने सबैले शरीरमा अक्सिजनको लेभल नाप्नुपर्छ भन्छन्, त्यसैले म अक्सिमिटर खरिद गर्न आएको हुँ ।’ त्यहाँ उनले अक्सिमिटर मात्रै किनेनन्, प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिके । कोरोना महामारीपछि अक्सिमिटर, थर्मामिटर खोज्नेहरूको संख्या बढेको त्रिपुरेश्वरस्थित हिमालयन सर्जिकल हाउसका सञ्चालक आशिष मल्लले बताए । पछिल्लो समय हरेक व्यक्तिले यस्ता उपकरणहरू घरघरमै राख्न थालेका छन् ।’ बानेश्वर थापागाउँस्थित एक फार्मेसी सञ्चालिका कमला घिमिरेको भनाइ पनि उस्तै छ । चिकित्सकीय डिजिटल सामग्रीहरूबाट घरमै परीक्षण सुविधा लिन सकिने भएकाले धेरैले खरिद गर्न थालेको उनले बताइन् । ‘द्रुत गतिमा प्रविधिको विकाससँगै मानिस पनि त्यहीअनुसार प्रविधिमैत्री हुन थालेका छन्’ उनले भनिन्, ‘विशेषगरी पल्स अक्सिमिटर, थर्मामिटर, ग्लुकोमिटर, ब्लड प्रेसर जाँच्ने मेसिनहरू धेरैको घरमा पाइन थालेका छन् ।’ कोरोना महामारीपछि त झनै यी उपकरणहरूको माग र आवश्यकता बढेको छ । घरमा आइसोलेसनमा बस्दा अक्सिमिटर त अनिवार्यजस्तै बनिसकेको छ । यो उपकरणले शरीरमा अक्सिजनको लेभल थाहा पाउन सहयोग गर्छ । बानेश्वरकी रमिला न्यौपानेले अघिल्लो वर्ष कोरोनाबाट उनको परिवार नै संक्रमित भएपछि जोखिम कम गर्न उनले पल्स अक्सिमिटर खरिद गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘शरीरको अक्सिजन लेभल घरमै नाप्न सकिने भएकाले महामारीको जोखिम न्यूनीकरणमा सहज हुने रहेछ ।’ औंलामा राखेर अक्सिजनको मात्रा पत्ता लगाउने यो उपकरण पछिल्लो समय हरेकको घरमा पुग्न थालेको छ । नेपाली बजारमा ६ सय ५० देखि ६ हजार रुपैंयाँसम्मका अक्सिमिटरहरू उपलब्ध छन् । ब्रान्ड र कम्पनीअनुसार मूल्यमा केही फरक छ । बजार चिनियाँ कम्पनीका अक्सिमिटरले ओगटेको छ । नेपाली बजारमा जर्मन र स्विसमा निर्मित अक्सिमिटरहरू पनि पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत पनि अक्सिमिटरहरू खरिद गर्ने सुविधा छ । अक्सिमिटरमा ‘फोर साइड भ्यु डिस्प्ले’, ‘पल्स रेट इन्डिकेटर’, ‘अलार्म सेट अप’, ‘अटो पावर अफ’ जस्ता विशेषता हुन्छन् । उपभोक्ताहरूले आ–आफ्नो आवश्यकता र इच्छानुसार अक्सिमिटर रोज्ने गरेका छन् । केही छोटो समय र केहीले लामो समयका लागि यी उपकरण खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । बिक्रेताहरूका अनुसार ‘अल्कलाइन ब्याट्री’ भएको अक्सिमिटर लामो समय टिक्ने हुन्छ । यसमा वारेन्टी/ग्यारेन्टीसहितका सुविधाहरू पनि छन् । बजारमा ३५ सय रुपैंयाँमा उपलब्ध हुने चिनियाँ कम्पनी ‘च्वाइसमेड’ को खरिदमा ग्राहकलाई दुई वर्षको वारेन्टीसमेत उपलब्ध छ । त्यस्तै, २३ सय मूल्य पर्ने ‘जम्पर’ को अक्सिमिटर खरिदमा पनि दुई वर्षको वारेन्टी छ । चिकित्सकहरूका अनुसार स्वस्थ व्यक्तिमा अक्सिजनको लेभल ९५ देखि १०० को बीचमा हुनुपर्छ । अक्सिमिटरलाई फरक–फरक हातमा लगाएर पनि अक्सिजनको लेभल थाहा पाउन सकिन्छ । नङमा पालिस लगाइएको अवस्थामा यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन । अक्सिमिटरसँगै बजारमा बढी बिक्री हुने उपकरणमा ‘डिजिटल थर्मामिटर’ पनि पर्छ । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा ‘डिजिटल’ र ‘गन’ थर्मामिटरको बिक्री बढी हुने गरेको छ । अधिकांश चिनियाँ थर्मामिटरहरू बजारमा उपलब्ध छन् । ‘डिजिटल’ थर्मामिटरको मूल्य एक सय ५० देखि ६ सय रुपैंयाँसम्म पर्छ । त्यस्तै, ‘गन’ थर्मामिटरको मूल्य १३ सय रुपैंयाँभन्दा माथि रहेको छ । कम्पनी र ब्रान्डअनुसार मूल्य फरक–फरक छ । डिजिटलमा ‘सिटिजन’ ब्रान्डको मूल्य ३ सय ५० र ‘माइक्रोलाइफ’ ब्रान्डको मूल्य तीन सय रुपैंयाँ छ । यसमा दुई वर्षको वारेन्टीसमेत छ । ‘गन’ थर्मामिटर अफिसियल प्रयोगका लागि उपयोगी छ । यो उपकरण निधार नजिक लगेर शरीरको तापक्रम नाप्ने गरिन्छ । यसको मूल्य पनि कम्पनी/ब्रान्डअनुसार विविधता छ । सबै उमेर समूहका लागि उपयोगी रहेको यो थर्मामिटरमा एलइडी डिस्प्लेसहितको अलार्म रहेको हुन्छ । पछिल्लो समय अव्यवस्थित दैनिकी, खानपान र जीवनशैलीका कारण धेरैमा उच्च रक्तचापको समस्या छ । रक्तचाप सही भए/नभएको जानकारी लिन धेरैले ब्लड प्रेसर नाप्ने उपकरण प्रयोग गर्छन् । यो उपकरणको मूल्य पनि ब्रान्डअनुसार फरक–फरक हुन्छ । बजारमा यसको मूल्य १५ सयदेखि ६ हजार रुपैंयाँसम्म पर्छ । नेपाली बजारमा ‘माइक्रोलाइफ’, ‘सिटिजन’, ‘रोसम्याक्स’ ब्रान्डका ब्लड प्रेसर नाप्ने उपकरण उपलब्ध छन् । यसमा पनि ‘डिजिटल’ र ‘नन–डिजिटल’ पाउन सकिन्छ । ‘युएसपी पोर्ट’ सहितका डिजिटल मेसिनहरू अटोमेटिक छन् । घरमै रक्तचाप नाप्दा विभिन्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । रक्तचाप नाप्नका लागि समय र पोजिसनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सिधा बसेर नाप्नुपर्छ । नाप्नुअघि व्यायाम गर्न नहुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।यसैगरी पछिल्लो समय सर्वाधिक बिक्री हुने चिकित्सकीय उपकरणमा ‘ग्लुकोमिटर’ पनि हो । मधुमेहका बिरामीका लागि यो उपकरण अनिवार्यजस्तै छ । यसले शरीरमा चिनीको मात्रा नाप्न सकिन्छ । यसबाट चिनी नाप्दा प्रयोगशालामा भन्दा १० अंक तलमाथि हुनसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘ग्लुकोमिटर’ ले खाली पेट वा खाना खाएको दुई घन्टापछि वा र्‍यान्डम नमुना लिई शरीरमा चिनीको मात्रा थाहा पाउन सकिन्छ । यो उपकरणले खाना खाएपछिको अंक १८० भन्दा बढी देखाएको अवस्थामा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ । बजारमा यो उपकरणको मूल्य १२ सयदेखि तीन हजारसम्म पर्छ । यसमा पनि कम्पनीअनुसार मूल्य फरक–फरक हुन्छ । यो उपकरणको खरिदमा सबै कम्पनीले वारेन्टीसमेत दिन्छन् । पहिलो पटक ग्लुकोमिटर खरिद गर्दा उपकरणसँग रगत परीक्षणमा आवश्यक पर्ने स्ट्रिप र निडल पनि कम्पनीले नै उपलब्ध गराउँछ । तर, पछि स्ट्रिप र निडल आफै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा ‘फिया बायोमेड स्यालुट’, ‘डीआर मोरेपेन’ र ‘क्लेभर चेक’ ग्लुकोमिटर पाइन्छ । डा. ज्योति भट्टराईमधुमेह तथा हर्मन रोग विशेषज्ञपछिल्लो समय डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बिरामीहरूका लागि घरमै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाउन यी उपकरणहरू उपयोगी छन् । कसरी चलाउने र कति मात्रामा चलाउने भन्ने विषयमा मानिस सचेत नहुँदा कहिलेकाहीँ समस्या हुने हो । मधुमेहको केसमा इन्सुलिन लगाइरहेका बिरामी छन् भने दिनमा चार पटकसम्म ग्लुकोमिटर प्रयोग गरेर सुगरको मात्रा हेर्न सकिन्छ । तर इन्सुलिन प्रयोग नगरेकाहरूले भने सातामा एक पटक मात्र ग्लुकोमिटर प्रयोग गर्न सक्छन् । डिजिटल उपकरणले सहज बनाए पनि पूर्णरूपमा भर भने पर्नुहुँदैन । जुनसुकै डिजिटल उपकरण शरीरसँग म्याचिङ भने हुँदैन । यसका लागि ल्याबमा गएर चिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।
प्रकृति दाहाल , फाल्गुन ११, २०७८
विशेषगरी जाडो मौसममा जिम वा व्यायामका लागि हुडी उपयुक्त पहिरन हो । व्यायाम गर्दा शरीरमा प्रशस्त मात्रामा पसिना आउँछ । चिसो मौसममा हुडीले शरीरमा भएको पसिनालाई सोस्ने काम गर्छ ।
प्रकृति दाहाल , माघ २०, २०७८
सिस्नोबाट उत्पादन हुने वाइन हो, नेसी । काठमाडौंस्थित चोभारमा उत्पादन हुने यो वाइन ०६४ देखि बजारमा उपलब्ध हुँदै आएको छ ।
नारी संवाददाता , फाल्गुन १४, २०७७
अनुहार फुट्नेदेखि ओठ फुट्नबाट बचाउनका लागि छालाको नरमपनलाई कायम राख्न बजारमा विभिन्न ब्राण्डका क्रिम तथा लिपबाम उपलब्ध छन् ।इन्डियन ब्रान्ड ‘जोय’ ले जाडोलाई लक्षित गर्दै ‘जोय हनी आलमन्ड क्रिम’, ‘बडी लोसन’ तथा ‘लिपबाम’ बजारमा ल्याएको छ । सुख्खा छालाका लागि ‘आलमन्ड वेल’ को मोस्चराइजिङ क्रिम बजारमा उपलब्ध छ ।
नारी संवाददाता , माघ ११, २०७७
जाडो मौसम सुरु भएसँगै हामीलाई न्यानो प्रदान गर्ने विभिन्न विद्युतीय उपकरण बजारमा आइसकेका छन् । विभिन्न कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ती हिटिङ उपकरण भित्र्याएका छन् ।
नारी संवाददाता , पुस १७, २०७७
सन् २०२० मालोरियलले सार्वजनिक रूपमा शतप्रतिशत इकोफ्रेन्डली प्याकेजिङ (पुनप्रयोजन जन्य) सामग्र उत्पादनगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बाहिरी जलविहीन सौन्दर्य पनि यसैतर्फ केन्द्रित छ । सन् २०१९ मा लोरियलले बाहिरी पानीको खपत घटाई सफलता हात पारेको थियो ।
रीनाप्रधान, कस्मेटोलोजिस्टजेष्ठ ६, २०७७
अटो लाइफ नेपालले पहिलो पटक टिभिएस स्कुटी पेप नेपाल भित्र्याएको थियो । स्कुटर भन्नेबित्तिकै स्कुटी पेप दिमागमा आइहाल्ने त्यतिबेलाको उक्त स्कुटर निकै लोकप्रिय थियो ।
लक्ष्मी भण्डारी, फाल्गुन १६, २०७६
स्किन र हेयर केयर
प्रोफेसनल जमानामा बाहिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि टिपटप हुनैपर्‍यो । व्यक्तित्व सबल बनाउन पनि यो जरुरी छ । यसका लागि सहयोगी तत्व हुन्— स्वास्थ्य र सौन्दर्य ।
नारी संवाददाता , माघ १२, २०७६
पर्यटकीय स्थानहरू ठमेल वसन्तपुर एरियामा मात्र पाइने हस्तकलाका सामान अहिले कुपन्डोलमा समेत उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
प्रकृति दाहाल, पुस २४, २०७६
कसरी चिन्ने उपभोग्य वस्तु  ?
आजको विज्ञानको युगमा परिस्कृत वस्तु र सेवाको उत्पादन एवं उपभोगको माग बढ्दो छ । साक्षरताको प्रतिशत कम रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठूलो संख्याका उपभोक्तामा सचेतना र जागरणको अभाव छ । उपभोक्ताले होसियार हुने पर्याप्त क्षमता राख्न सक्ने अवस्था छैन ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, आश्विन ७, २०७६
हिजोआज प्राय: किनमेल डेबिड वा क्रेडिट कार्डबाटै हुन्छ । ठूला मल, सपिङ स्टोर, ग्रोसरी तथा मार्टहरूमा सामग्री किनमेलका लागि नगद बोकेर हिँड्नु पर्दैन । यस्ता ठाउँमा भएका आउटलेट तथा पसलहरूले पनि एससिटी, युनियन पे, भिसा, मास्टर आदि डेबिड तथा क्रेडिट कार्डद्वारा बिल तिर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएका छन् भने सामान खरिदको बिल सरकारलाई तिर्ने करसहित आफ्नो हातमा आइपुग्छ ।
लक्ष्मी भण्डारी थापा, भाद्र २३, २०७६